Sirta kalimada TOWXIIDKA لآ اِلَهَ اِلّا اللّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوُل اللّهِ !! - Caasimada Online
Home Diinta Sirta kalimada TOWXIIDKA لآ اِلَهَ اِلّا اللّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوُل اللّهِ !!
7x 17417 = 121919 Subxanallaah!!Haddaynu raqamyadaasi (121919) si caksi ah ka dhigno, waxay noqonayaan sidan 919121, bimacnaa taasoo ah sidoo kale raqamka 7 oo dhowr jibbaaran. Subxanallaah!! waa taas calaaqada cajiibka ee kalimaddan iyo raqamka 19 iyo raqamkeeda 12d iyo raqamka 7 ka dhaxaysa.7x 131303= 919121 Subxanallaah!!.Mar kale haddaanu ixtimaalno oo raqamka goonida ahi aanu dhexda gelinna labada raqam ee isu egna aan labada dhinac marinno waxaa inoosoo baxaysa sidan 191219, Subxanallaah!! tanina waa dhowr jibbaarka raqamka 7.7x 27317= 191219 Subxanallaah!!.
Haddaynu sii ixtimaalno mar kale, waxaynu sameynay labada raqam ee isu eg ayaan labada dhinac marinnay, raqamka goonnida ahina dhexda ayaan gelinnay, markaasaynu helnaay sidan 191219. Haddaba haddii tiradan aan si caksi ah u qorna waxaa inoosoo baxaya sidan 912191, subxanallaah!! tanina waa dhowr jibbaarka raqamka 7. 7x 130313=912191 Subxanallaah!!.
Haddiina aan eegno inta dambee amarka ama ogalaashaha ahi, waxaanu heleynaa in Quraanka ay labadaasi kalmadood ee ugu dambeeya cibaaradda ay kusoo arooreen iyagoo sidaasi isu wata 19 mar. Marka 19d-na waxaa lagu khatimay aayadda 19d ee suuradda. Subxanallaah!!.U fiirso mar kale isla labadaasi kalmadood(إلا الله), waxay dhanka kale ka kooban yahiin 7 xarfood isku darkooda. Subxanallaah!!.Cibaaradani cajiibka ahi waa middii uu 13 sano dadkii reer Makkah uu Nebi Muxammad (NNKH) dadka ugu yeerayay. Waa midduu 60 mile inta u jaray la tegey magaallada Dhaa’if, si dadka u yiraahdaan kalmadahani qiimaha badan, balse ay kusoo dhagaxyeeyeen lana soo eryeen. Waa risaaladii uu dadka muddo 10 sano ah ku barayay magaallada Madiinah. Waa risaaladii uu udiray boqorrada si ay u yiraahdaan kalmadahani qiimaha badan. Waa kalmadda sababteeda loosoo direy oo Alle risaaladani ugu soo dhiibay. Waana sidoo kale miftaaxa (furaha) Jannada. Maxaa haddaba diidaya in furaha Jannada uu yeesha sha’nigaasi weyniga badan?Tani waa risaala raqameed oo cajiib ah oo ku wajahan inta laab shakiga qabta, ee ka shakida risaalada nebi Muxammad (NNKH), inta kalee muslimka ahina, wax aanan towfiiq iyo sugnaan iyo iimaan ahayn kama qaadaan. Mana yiraahdaan wax kale Subxaanallaah!! mooyaane, iyo inay aqriyaan qowlka Alle sarreeye ee ah.
Afeef: Qormadani waxay ugaar tahay qoraha iyo webka caasimada.net, lama daabacan karo idan la’aan.